के रक्सीले यौन क्षमता बढाउँछ ? | Kendrabindu Nepal Online News
के रक्सीले यौन क्षमता बढाउँछ ?
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार १९:०१
काठमाडौं । दशैँलगायत पर्वहरू नजिकिन थालेका छन् । अन्य बेला चाडपर्वमा रक्सीलगायत मादक पदार्थ पिउन, पिलाउन अलि जोडबल गरिन्छ । रक्सी सेवनले यौन जीवन मात्र होइन, मुटुलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने अल्पज्ञानको आधारमा बोटलका बोटल सिध्याउनेहरूको कमी छैन ।
ठिक्क मात्राको रक्सी सेवनले शरीरलाई फाइदा नै पुर्‍याउँछ तर यो उमेरअनुसार कुन मानिसलाई कति चाहिँ ठिक्क हो र माहौलमा रक्सी पिउँदै जाने क्रममा त्यो मात्रामा अडिग भएर बस्न सक्नेको संख्या कति होला त ? तर, पनि यौनका मामिलामा विभिन्न प्रकारको खानाले जस्तै मदिराको मात्राअनुसार फाइदा र बेफाइदा भने पक्कै छन्।
हामी समाजअनुसार निश्चित नियम र परिवेशमा बाँधिएका हुन्छौँ। होशमा हुँदा सभ्य समाजमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने हेक्का भइरहन्छ र त्यसै मुताबिक आफ्नो बानी–बेहोरा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौँ। तर, रक्सीलगायत मादक पदार्थ सेवन गरेपछि क्रमशः मानसिक सन्तुलन गुमाउँदै जान्छौँ। रक्सी सेवन नगर्दाको समय बोल्न धक मान्ने मान्छेहरू रक्सीको नशा चढ्दै जाँदा खुल्ने हुन्छन्।
त्यसो भएर मद्यपानले खासमा प्रत्यक्ष यौन क्षमता बढ्ने होइन कि यौन चाहना प्रस्टसँग भन्न नसक्ने व्यक्ति रक्सीको असरसँगै खुल्न थाल्छ। त्यसैले रक्सीले सकारात्मक प्रभाव परेको भान हुन्छ। तर, यो केवल भ्रम हो।
हल्का मद्यपानले संकोच हटाउनुका साथै सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत गर्दछ। त्यही भएर नयाँ जोडी वा नवदम्पतीबीच एकापसमा डर वा हिचकिचाहट हटाई यौनक्रिया सहज बनाउन सघाउ पुर्‍याउने हुनाले मद्यपानले यौन क्षमता वा यौन चाहना बढाएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले मद्यपानले यौनको विषयमा सकारात्मक प्रभाव पुर्‍याउँछ भन्ने धारणा धेरैले बनाएको देखिन्छ। तर, अधिक मात्रामा मद्यपान गर्नाले यौन क्षमतामा नकारात्मक असर पुग्छ। मदिराको नशामा प्रेमिका वा श्रीमतीको चाहना नबुझी जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्न खोजेमा यौन हिंसा बढ्छ।
पारिवारिक सम्बन्ध तथा दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुँदैद, न यौन जीवन ने स्वस्थ हुन्छ। रक्सी सेवनकै कारण घरेलु हिंसा, महिलाविरुद्ध हिंसा, यौन हिंसा हुने गरेको खबर आइरहेका हुन्छन्। अधिक नशाकै कारण वा कतिपय अवस्थामा महिला पार्टनरलाई पनि अधिक मद्यपान गराई बलात्कारलगायत जघन्य घटना भएको समाचार पनि सुन्नमा आउँछ।
अन्य बेला लज्जालु स्वभावका एवं समाजमा खुल्न नचाहने व्यक्ति पनि मद्यपानको प्रभावमा यौन चाहना व्यक्त गर्न वा यौनिक हाउभाउ निर्धक्क देखाउन थाल्ने हुनाले मद्यपानसँगै यौन सम्बन्धबारे सोचिरहेका व्यक्तिले सकारात्मक परिणामको श्रेय मद्यपानलाई दिने गर्छन्। महिलाको दाँजोमा पुरुषले मद्यपानको प्रभाव राम्रो हुने गरेको व्यक्त गरे पनि वास्तविकता त्यसो होइन। त्यसो हुँदो हो त महिला पार्टनरहरूमा पनि समान असर हुनुपथ्र्यो।
तारन्तार मद्यपानले यौनसम्पर्कका बेला लिंग उत्तेजित नहुने, महिला पार्टनरको चाहना पूरा नहुने कारण कालान्तरमा यौन जीवनमै समस्या खडा हुन सक्छ। मद्यपानको प्रभावमा होसहवाश नै नहुने हुनाले पार्टनरबीचको यौन सम्बन्धमा गोप्यता नरहने, वरिपरिको वातावरणको ख्याल नहुने हुनाले घरपरिवार तथा समाजमा नराम्रो सन्देश जान सक्छ। त्यसो त यौन चाहना वा गतिविधिका लागि मानव शरीरमा (विशेषतः पुरुषमा) टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको आवश्यकता हुन्छ। लामो समय मद्यपान गर्नाले टेस्टोस्टेरोनको उत्पादनमै नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ। मद्यपानको लतले समग्र स्वास्थ्यमै नकारात्मक प्रभाव पर्छ। मद्यपानले कलेजो, मिर्गौला, मुटुको रोग भयो भने व्यक्ति विशेषको स्वास्थ्यका साथै यौन जीवन पनि स्वस्थ हुँदैन।
महिलामा अधिक मद्यपानले योनि क्षेत्रमा रक्त प्रवाह घटाउने हुनाले योनिस्राव घटाउँछ। योनि सुक्खा भएमा यौन सम्पर्कका क्रममा हुने पीडाका कारण यौन सम्बन्ध त्यति सहज हुँदैन। अधिक मद्यपान गरेको समय पुरुष पार्टनरले वास्तवमा यौनांग उत्तेजित पार्न, लिंग कडा पार्न नसक्ने हुन्छ। साथै, नशाको सुरमा सीधै यौन सम्पर्कमा मात्र जोड दिन खोज्ने हुनाले सफल यौन सम्बन्धका लागि आवश्यक प्राक्क्रीडाको अभावमा दुवै पार्टनरले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
मदिराको नशामा स्थापित यौन सम्बन्धका कारण अनिच्छित गर्भ रहन सक्छ। यसबाट मानसिक तनाव, दम्पतीबीच भनाभन, आर्थिक बोझलगायत समस्या निम्तिने हुन्छन्। अध्ययनहरूले धेरैजसो बलात्कार, यौन हिंसाका घटना मद्यपानकै प्रभावमा हुने गरेको देखाएका छन्। मदिराले लट्ठ भएपछि सही र गलत छुट्याउन नसक्ने हुनाले यौन सम्बन्ध जोखिमयुक्त हुन सक्छ। किशोरीका हकमा मदिराका कारण असुरक्षित यौन सम्पर्क हुन गई कलिलो उमेरमा गर्भ रहने सम्भावना पनि हुन्छ।
रक्सी सेवनले भियग्राले जस्तो यौन क्षमता वृद्धि गराइहाल्ने होइन। हल्का मात्राको मद्यपानले मन भित्रको डर, शंका हटाई यौन सम्बन्ध राख्न सकारात्मक प्रभाव देखाएजस्तो भए पनि अधिक र अनियन्त्रित मद्यपानले राम्रो नतिजा ल्याउँदैन। यौन जीवनलाई नै असर पुग्ने गरी कदापि मद्यपान गर्नु हुँदैन। यौनप्रतिको डर हटाउने, लघुताभास हटाउने एवं प्राक्क्रीडाको अंशको रूपमा महिला तथा पुरुष दुवैले हल्का मात्रामा मदिरा सेवन गर्नु चाहिँ फाइदाजनक हुन सक्छ। तर, मदिराको मात्रा भने हेक्का राख्नुपर्छ।
(अन्नपूर्ण सम्पूर्णमा समाचार लेखिएको छ ।)
मदिरा, यौन क्षमता, यौन जीवन, रक्सी
Prevएक वर्षमा १० लाख कार्यकर्ताले काम नपाउँदा दुःख पाएः प्रचण्ड
विपन्‍न जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटNext
अब रक्सी खाएर कार्यालय जाने कर्मचारीको जागिर चट् !